Üniversite / Ny Oniversite – Diyaloglar | OpenTran
Üniversite / Ny Oniversite – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Üniversite / Ny Oniversite – Diyaloglar
Adama: Salama, Jane. Manao ahoana ianao?
Julia: Salama, eo. Salama aho! Ary manao ahoana ianao?
Adam: salama tsara aho, misaotra. Mbola tsy nahita anao nandritra ny taona maro, na dia any amin'ny andrim-pampianarana iray aza no mianatra.
Julia: Goavambe ny anjerimanontolo fantatrareo. Voalohany indrindra, mianatra amin'ny fahaizana samihafa izahay. Faharoa, niara-nifindra tamin'ny trano hafa izahay tamin'ny volana lasa. Mahalana aho no tazana ao amin'ny trano afovoany.
Adama: hitako. Dia inona no ataonao eto anio?
Julia: Tonga nindrana boky vitsivitsy tao amin'ny tranomboky aho.
Adama: Te hisakafo atoandro ao amin'ny cantine oniversite ve ianao?
Julia: Eny, amin'ny fahafinaretana. Manana kafe ve izy ireo any?
Adama: Azoko antoka fa manao izany izy ireo. Tiako ny trano fisakafoananay. Azonao atao ny mihinana tsakitsaky haingana any sy sakafo lehibe raha tianao.
Julia: aleoko mihinan-kanina haingana. Ny hany tadiaviko izao dia ny kaopy misy kafe mainty sy bun-kanelina.
Adama: Izaho koa. Noho izany, andao handeha any ary hiresaka kely. Holazainao amiko izay vaovao ao amin'ny departemantanao ary hotantaraiko anao ny fanovana eto.
Julia: Tsara izany. Raha ny marina dia tsy dia misy fiovana maro ao. Vao avy niova ny mpampianatra ny Economics antsika. Ny teo aloha dia nanambady ary nifindra tany amin'ny tanàna hafa.
Adama: hitako. Eny, raha miresaka momba an-dRamatoa Fisher ianao dia mpampianatra anay koa. Manana lehilahy antonony izahay izao manao lahateny fa tsy izy.
Julia: Fa ny antsika kosa tovovavy iray. Angamba, nanakarama mpampianatra roa vaovao momba ny Toekarena izy ireo. Inona koa no mitranga eto?
Adam: Ary tamin'ny herinandro lasa teo dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana tanàna tamin'ny lalao chess izahay. Tokony holazaiko fa teo amin'ny sehatra tsara ny ekipanay.
Julia: nandresy ve ianao?
Adama: Tsia, tsy nanao izany izahay. Fa azontsika ny toerana faharoa.
Julia: Tsara izany. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana iray ihany koa izahay, volley volley vavy izany. Nandresy ny ekipan'ny mpampianatra anay.
Adama: tsara izany! Arahabaina!
Julia: Ahoana no hankalazanao ity Taom-baovao ity?
Adam: Efa nanomana fampisehoana fohy, saingy mampihomehy ny vondrona misy anay, izay hanaraka «latabatra mamy» sy dihy. Te hiaraka aminay ve ianao?
Julia: Rahoviana no miseho izany?
Adama: Sabotsy ho avy izao.
Julia: Miala tsiny aho fa tsy afaka. Mivondrona vondrona koa izahay anio. Nampanantena ny mpampianatra anay fa hanasa ireo mpilalao teatra sasany izay sakaizany akaiky. Heverina fa hanao fihetsika mahaliana amin'ny lohahevitry ny Krismasy izy ireo.
Adama: hitako. Tsara ny feo. Raha tsy sahirana aho tamin'io andro io dia ho hitako izany.
Julia: Manomboka amin'ny 6 hariva, mbola afaka ara-potoana ianao.
Adama: Marina ny anao. Ny fivorian'ny vondrona misy antsika dia amin'ny 2 ora tolakandro, ka tena vitako izany.
Julia: Mahafinaritra! Mandrapihaona amin'ny herinandro ambony amin'izay.
Adama: mihaona. Veloma.
İyi ki doğdun Tratry ny tsingerintaona nahaterahana
Günlük program Fandaharam-potoana isan'andro
Yaz İçin Planlarım Ny drafitra ho an'ny fahavaratra
Masada Eo amin'ny latabatra